तपाईंको विशेष आवश्यकता बच्चाको लागि उत्तम GPS ट्र्याकिंग प्रणाली कसरी छनौट गर्ने? | सिंगापुर शीर्ष मिनी जीपीएस निजी ट्र्याकर ऑटिज्म / अटिस्टिक किड्स र डिमेन्शिया बुजुर्गका लागि
तपाईंको विशेष आवश्यकता बच्चाको लागि उत्तम GPS ट्र्याकिंग प्रणाली कसरी छनौट गर्ने?
Tags: Autism स्वतन्त्रता बच्चा जीपीएस ट्रैकर ग्लोबल पोजिशनिंग प्रणाली बच्चाहरू ट्र्याकर वाच
दिन प्रतिदिन संसारको विकास भइरहेको छ। हामी दिनहुँ नयाँ आविष्कारहरू देख्न सक्छौं। यस दरमा, मानिस अचम्मको ग्याजेटहरू र उपकरणहरूले भरिएको सम्पूर्ण नयाँ युगमा प्रवेश गर्नेछ। आधुनिक र उदात्त आविष्कारहरूको यस सागरमा GPS को आविष्कार भएको छ। त्यसोभए, GPS के हो? हामी यसमा द्रुत नजर राखौं, र त्यसपछि हामी यस बारे थप छलफल गर्नेछौं।
GPS भनेको "ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम" हो। जीपीएस ट्र्याकिंग प्रणालीमा पोर्टेबल उपकरणहरू हुन्छन् जसले मानिसहरूलाई एकै पल्टमा उनीहरूको स्थानहरू मोनिटर गर्न र ट्र्याक गर्न अनुमति दिन्छ। यसको पछाडि मुख्य कुरा अन्तरिक्षमा उपग्रहहरू हुन् जुन प्रायः व्यक्तिको स्थान निर्दिष्ट गर्न प्रयोग गरिन्छ। तपाईं कुन ठाउँमा हुनुहुन्छ भन्ने कुराको फरक पर्दैन, जीपीएसले तपाईंलाई तपाईंको स्थान प्रभावकारी रूपमा बताउँदछ। प्रायः जीपीएस ट्र्याकिंग प्रणाली स्थानहरू खोज्न प्रयोग गरिन्छ। बाटोमा हराउनु भयो? समस्या छैन! GPS ले सबैभन्दा सही स्थान दिनेछ जसमा तपाईं हाल हुनुहुन्छ र तपाईंलाई तपाईंको गन्तव्यमा मार्गदर्शन गर्दछ। अब हामी जीपीएस ट्र्याकिंग प्रणालीले कसरी काम गर्छ भन्ने बारे एक विचार गरौं।
तपाईंको विशेष आवश्यकता बच्चाहरूको लागि उत्तम जीपीएस ट्र्याकिंग प्रणाली कसरी छनौट गर्ने:
केहि बर्षहरुमा बच्चाहरुमा अटिजम सामान्य भइरहेको छ। अटिजम भएका बच्चाहरूले सञ्चारमा धेरै कठिनाइहरू महसुस गर्दछन्। तिनीहरू समय समयमा असामान्य व्यवहार देखाउँछन्। हामी तिनीहरूको आचरणको पूर्वानुमान गर्न सक्दैनौं। ऑटिज्मबाट पीडित बच्चाहरूका लागि, जीपीएस ट्रैकर प्रयोग गर्नु एक आवश्यकता हो, लक्जरी होइन। हामी देख्न सक्छौं, औटिज्म भएका बच्चाहरूको व्यवहारमा अक्सर परिवर्तन हुन्छ र तिनीहरू घर बाहिर बाहिर जान्छन्। यस्ता बच्चाहरूको लागि जीपीएस उत्तम चीज हो। जे भए पनि यी बच्चाहरू कहाँ जान्छन्, तिनीहरूको आमा बुबाको स्थान तिनीहरूको समय हुँदैन। जहाँसम्म उत्तम जीपीएस ट्र्याकिंग प्रणालीको सवाल हो, यससँग धेरै गुणहरू हुनुपर्दछ र एक अलराउन्डर हुनुपर्दछ।
के हामीलाई साँच्चिकै अटिजम बच्चाहरूको लागि विशेष ट्र्याकर चाहिन्छ?
स्वतन्त्रता बच्चाहरु मा एक ठूलो प्रभाव छ। यसले उनीहरूको व्यवहारलाई पूर्ण रूपमा परिवर्तन गर्न सक्दछ। त्यस्ता बच्चाहरू वास्तवमै ह्यान्डल गर्न संवेदनशील हुन्छन्। त्यहाँ खास कुनै ट्र्याकर छैन जुन अटिजम बच्चाहरूको लागि प्रयोग गरिन्छ। तिनीहरू साधारण जीपीएस ट्रैकरहरूको साथ ट्र्याक गर्न सकिन्छ। वास्तवमा यो तिनीहरूको लागि ठूलो फाइदा हो। यहाँ समस्या यो छ कि ट्र्याकर बच्चाको लागि ध्यान नदिनु पर्ने हुन्छ। त्यसोभए ऊ डराउन नपाओस्।
GPS ट्र्याकर किन्नु अघि विचार गर्नुपर्ने कुरा:
अब हामी एक राम्रो जीपीएस ट्र्याकिंग प्रणाली किन्नु अघि हामीले विचार गर्नु पर्ने चीजहरूको बारेमा विस्तृत हेरौं:
एक व्यक्ति के ट्रयाक गर्न चाहन्छ?
एक व्यक्तिले पहिले GPS स्थापनाको उद्देश्य थाहा पाउनु पर्छ। जस्तै उसले जान्नु पर्छ उसले कुन चीजलाई ट्र्याक गरिरहेको छ। त्यसो भए हामी उसको लागि उपकरणको प्रकार वर्गीकृत गर्न सक्छौं।
यदि ऊ आफ्नो गाडी ट्र्याक गर्न चाहन्छ भने। त्यसोभए उपकरण शारीरिक रूपमा बलियो र कडा हुनुपर्छ। योसँग ब्याट्री समस्या हुँदैन किनकि यो कारको ब्याट्रीमा सिधा जडान हुने छ। योसँग केहि कडा चुम्बकीय समर्थन पनि हुनुपर्दछ त्यसैले यो गाडीको बडीमा जोड्न सकिन्छ। यो पनि प्रोग्राम गर्नुपर्दछ त्यसैले यसले टाढाको स्थानमा गाडीको खराबी गर्न सक्दैन। यो पनि ह्याक गर्न योग्य हुनुहुन्न।
तर यहाँ हाम्रो मुख्य चिन्ता ऑटिज्म भएका बच्चाहरू हुन्। ट्र्याकर सुविधाहरूसँग राम्रोसँग सुसज्जित हुनुपर्छ जसले बच्चालाई हेरचाह प्रदान गर्दछ। र यसले आमा बुबाको तनावलाई पनि हटाउँदछ।
यदि एक व्यक्ति आफ्नो बच्चा ट्र्याक गर्न चाहन्छ भने, त्यसपछि ट्र्याकर सानो हुनुपर्दछ। त्यसो भए, यसलाई सजिलैसँग लगाउन सकिन्छ। यो बारम्बार रिपोर्ट गर्न पनि प्रोग्राम हुनुपर्दछ। सानो उपकरणहरूमा सामान्यतया थोरै ब्याट्री समयको साथ कमजोर ब्याट्री हुन्छ। ब्याट्री समय राम्रो हुनु पर्छ। त्यहाँ एक SOS बटन पनि हुनुपर्दछ जुन आपतकालीन सन्देश माता-पिताको स्मार्टफोनमा पठाउँदछ। यो वाटरप्रूफ शरीरको थपको साथ SOS बटन हटाउने घरपालुवा जनावरहरूको अवस्थामा पनि प्रयोग गर्न सकिन्छ।
यो विशेष गरी बच्चाहरूको मनपर्दो अनुसार बनाउनु पर्छ ताकि बच्चाले त्यो कुरा मनपराउन सुरू गर्न सक्दछ। र ऊ सधैं यसलाई आफूसँगै राख्दछ। यो दुबै आमा बुबा र बच्चाको लागि उत्तम हुनेछ। उही समयमा, यो कम्पनी को लागी धेरै राम्रो हुनेछ।
GPS उपकरणको लागत:
अर्को मुख्य कुरा जुन दिमागमा राख्नुपर्दछ GPS उपकरणको मूल्य हो। यो किफायती हुनुपर्दछ र एकै समयमा, यो पनि उत्तम काम प्रदान गर्नुपर्दछ। कम्पनीले पनि धेरै फरक पार्छ। यसले आफ्ना ग्राहकहरूलाई समर्थन गर्नुपर्दछ र उनीहरूलाई उचित सन्तुष्टि प्रदान गर्नुपर्दछ। सामान्यतया, व्यक्तिले GPS उपकरणको लागि $ 50- $ 100 र सदस्यताहरूको लागि $ 20- $ 40 तिर्नु पर्छ। कम्पनीले खरीददारलाई एउटा अनुबन्धमा बाँध्नु हुँदैन। प्रयोगकर्ताले सजिलैसँग उसको इच्छामा सदस्यता समाप्त गर्नुपर्दछ।
उपकरणको ब्याट्री समय:
ब्याट्री समय उत्तम GPS उपकरण खरीद गर्न को लागी एक महत्वपूर्ण कारक हुन देखिँदैन। तर यदि हामीले स्पष्ट रूपमा देख्यौं भने हामी यो कारकको महत्त्व बुझ्न सक्छौं। मानौं एउटा बच्चा उसको घर बाहिर भटकिरहेको छ। उसको बुबाआमा जीपीएस संग उसलाई पाउन सक्नुहुन्छ। तर ट्र्याकरको ब्याट्री अचानक कम हुने बित्तिकै प्रणाली बन्द हुन्छ, त्यसोभए, त्यस्ता उपकरणको प्रयोग के हुनेछ। तसर्थ, एक व्यक्तिले यो कारक विचार गर्नु पर्छ र उसले उपकरणको लागि सोध्नु पर्छ जुन सभ्य ब्याट्री समय छ। ठूलो आकारको ब्याट्री हुनु प्रयोगकर्ताका लागि समस्या नहुनु हो तर उसले बिर्सनु हुँदैन जुन ब्याट्री चिरस्थायी र सजिलै बदल्न मिल्छ।
हल्का वजन ट्रैकर:
ट्र्याकर हल्का तौलको हुनु पर्छ। यो बच्चाहरूको लागि कारण हो। यदि ट्र्याकर भारी छ भने यो बच्चालाई बोक्नको लागि समस्या हुनेछ। यसले बच्चा लाई ट्र्याकर गुमाउन पनि सक्छ। यो अभिभावकको लागि पनि ठूलो समस्या हो। तिनीहरूले आफ्ना बच्चाहरूलाई यसरी ट्र्याक गर्न सक्दैनन्। त्यसकारण, ट्र्याकर हल्का हुनुपर्दछ ताकि यो पाखुरा वा बच्चाको खुट्टामा जोड्न सकिन्छ।
प्रूफ उपकरणहरू ह्याक गर्नुहोस्:
ब्याट्री समस्या जस्तै, यो समस्या पनि गम्भीर जस्तो देखिदैन। तर यसले प्रयोगकर्तालाई गम्भीर समस्या प्रदान गर्न सक्छ। उपकरण ह्याक प्रूफ हुनु पर्छ। मानौं त्यहाँ एक जीपीएस उपकरण कार संग जोडिएको छ र यसलाई ह्याक गरिएको छ। त्यसोभए यो गाडी कहिँ पनि पार्क गर्न सुरक्षित हुँदैन किनकि जीपीएस ट्र्याकरले यसको स्थान ह्याकरहरूलाई प्रकट गर्दछ। यो कुराले ठूलो मात्रामा चोरीको खतरा बढाउँदछ। प्रयोगकर्ताको लागि एक मात्र उपचार अस्थायी रूपमा जीपीएस ट्र्याकर असक्षम गर्नु हो जुन त्यसपछि कुनै कामको हुँदैन। त्यसकारण, प्रयोगकर्ताले यो सुनिश्चित गर्नुपर्दछ कि GPS ट्र्याकर ह्याक-प्रूफ हो।
5503 कुल दृश्यहरू 16 हेराइ आज